တစ်နေ့ ကို အချိန်ရှစ်နာရီ ထက်ပိုအိပ်ရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာ (၆) ခု – Nyi Ma Lay
တစ်နေ့ ကို အချိန်ရှစ်နာရီ ထက်ပိုအိပ်ရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာ (၆) ခု
By Nyi Ma LayPosted on August 3, 2021
ကျန်း မာရေး အတွက် တနေ့ ကို ရှစ်နာရီေ အာက် နည်းပြီး မအိပ်သ င့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူအများစုက အိပ်ချိန်ရှ စ်နာရီထက် ပိုများရင်လည်း ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေကြပါ တယ်။
တကယ်တော့ အိပ်ချိန်ရှစ်နာ ရီထက် ပိုခြင်းက အိပ်ချိန် ရှစ်နာရီေ အာက် လျော့ခြင်း လိုပဲ ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ် ပေးပါတယ်။
1. အိပ်မပျော်ခြင်း – ဒီအချက်က ထူးဆန်းနေ ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတရံ မှာ အိပ်မပျော်ခြင်း က အိပ်စက်မှုပုံစံ မှားယွင်းမှုနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ သင်က ကွန်ပျူတာကို ညနက်တဲ့ အထိ သုံးနေရင်၊ နောက် နေ့မှ အိပ်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးထားရင် အိပ်မပျော်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ရလာမှာပါ။နှစ်ရက်လောက် မအိပ်ဘဲ နေနိုင်ပေမယ့် နောက်ရက်တွေ မှာ အိပ်ချိန် ကစဥ့်ကလျားတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
အိပ်ချိန်န ည်းအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ ခန္ဓါကိုယ် အတွက် အိပ်ချိန်7နာရီနဲ့ 8 နာရီကြား ရှိဖို့ဆိုရင်ကျ န်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အ စားအစာေ တွကို စားပါ ။အရက်၊ ဘီယာသောက်သုံးမှုကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ အိပ်ချိန်နဲ့ နိုးချိန် မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကာဖိန်းဓါတ် ပါဝင်တဲ့ သောက်စရာတွေကို ရှောင်ပါ။ အိပ်ခန်း တိတ်ဆိတ်ပြီး အနားယူလို့ ကောင်းတဲ့ နေရာမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
2 .မှတ်ဉာဏ် အားနည်းလာခြင်း – အိပ်ချိန်ကြာမြင့်ြ ခင်းက ဦးနှောက် ရဲ့ အလုပ်လု ပ်မှုကို ထိခိုက်စေ ပါတယ်။ အိပ်ချိန်များတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ညပိုင်း အိပ်မပျော်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတ ယ်။ အိပ်ချိန်များခြင်းက ဦးနှောက်ရဲ့သိမှု လုပ်င န်းတွေကို ထိခို က်စေပြီး မှတ်ဉာဏ် က ကြာရှည်မမှတ်နိုင် ဘဲ မေ့လာတတ်ပါတယ်။
3 ခေါင်းကိုက်ခြင်း – လုံးဝမအိပ်ခြင်းက ခေါင်းကိုက်စေတတ် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိပ်ချိန် များရင် လည်း ခေါင်းကိုက် တတ်ပါ တယ်။ အားလပ်ရက်တွေ မှာတောင် အချိန်အကြာကြီး မအိပ်သင့်ပါဘူး။ အိပ်ချိန်ကြာပြီးနောက် နိုးလာတဲ့အခါ ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာခံ စားရတာကို လူတိုင်းနီးပါး ကြုံဖူးကြမှာပါ၊
4. နှလုံးရောဂါ – အိပ်ချိန် အလွန်ကြာတဲ့ အခါ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးရုံသာ မက နှလုံးေ ရာဂါလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာ နှလုံးေ ရာဂါက အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါ ဖြစ်လာပါပြီ။ တစ်နေ့ ကို ရှစ်နာရီ ထက် ပိုအိပ်သူတွေက နှလုံးရော ဂါနဲ့ သေဆုံးနိုင်ချေ 34% ရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ က အမျိုးသားတွေ ထက် အိပ်ချိန် ပိုများပြီး နှလုံးရောဂါ နဲ့ သေဆုံးနိုင်ချေ ပိုများ တယ်လို့ လေ့လာချက်တွေ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
5. စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း – အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့သူတွေက စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို ခံစားရတတ် ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး အိပ်တဲ့သူတွေက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းလျခြင်းကို ခံစားရတတ် ပါတယ်။မ နက်ဆိုရင် အိပ်ရာကနေ မခွာချင်အောင် အိပ်တတ်တဲ့ အခါတွေ လည်း ရှိမှာပါ။
အဲဒီအခါ စိတ်ဓါ တ်ကျခြင်းက အိ ပ်ရာနားကို ရောက်လာ မှာပါ။
6. ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာခြင်း – အိပ်ချိန် နည်းပါးခြင်းရော အိပ်ချိန်များခြင်းကပါ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
အိပ်ချိန်များ ရင် လည်း ဝလာတ တ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန် များတဲ့ အခါ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့လည်း အချိန်မ ရတော့ပါဘူး ။
Previous post ခုလိုအချိန်မှာ အဆုတ် ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေ
Next post နာမည်ကျော် MMA Fighter ဖြစ်မလာခင်တုန်းက ပျားလုပ်သား လုပ်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း